China Die casting lapel pin ifektri nabakhiqizi | Kingtai
Lawa maphini anesitayela sawo sokuklama esiyingqayizivele, ngokuya ngokuthandwa yikhasimende ukuklama umkhiqizo.
Izinhlobonhlobo zemisebenzi yezandla ziyatholakala, kuhlanganise nokwengeza imibala egqamile koqweqwe lwawo.
Izikhonkwane ze-lapel ezenziwe ngokwezifiso zenziwe nge-zinc noma i-pewter futhi zenziwe kusetshenziswa inqubo yokuncibilika.
Insimbi ishisa ibe yi-liquid, ithululelwa esikhunjeni, futhi ikhiqizwa ngokusakazwa okujikelezayo.
Isikhathi sokukhiqiza: izinsuku zokusebenza eziyi-15-20 ngemuva kokubuyekezwa kobuciko.
Ingabe ufuna amaphinikhodi angokwezifiso?
Inkampani yethu ingakhiqiza izikhonkwane ze-lapel eziyi-3D!
Izikhonkwane zokusakaza zinikeza i-multirelief engavamile ukuzuzwa kusetshenziswa izindlela ezijwayelekile zokugxiviza.
Kunokuba ube nendawo eyodwa kuphela ephakanyisiwe kanye nendawo eyodwa yokuhlehla (njengakwisitayela sephini lelapel engu-2-D), lolu hlobo lwesifanekiso lubonisa kangcono amakhonsathi ezwe, lwakha imifanekiso eyinkimbinkimbi yezakhiwo nemininingwane yobuso, umumo nezilwane.
Ukulingisa ukufa. Izikhonkwane ze-Die casting zenziwa kusuka ku-castings kunenqubo yokugxiviza.
Isikhunta siyakhiwa bese insimbi ewuketshezi ithululelwa esikhunjeni ukuze kwakheke iphini lokuphonswa ngokufa.
Ngenxa yokuthi le nqubo ibiza kakhulu, uma ukusika akudingi kungcono ukukhetha i-koqweqwe lwawo oluthambile ngokwezifiso noma inaliti eqinile yoqweqwe lwangokwezifiso.
Iphinikhodi yangokwezifiso ye-die-casting Ithini iphinikhodi yangokwezifiso?
Izikhonkwane ze-die casting zihlukile kakhulu ngoba umumo awuyona inkinga.Ingenza noma isiphi isimo ikhasimende elisifunayo.Ingenziwa ngokusikwa okuzungeze uhlamvu, imbobo phakathi kwephini, iphethini ekhethekile, nanoma iyiphi enye. into oyithandayo.
Bakha izimo eziyinkimbinkimbi nemiklamo ngokwenza isikhunta esingokwezifiso bese bejova insimbi encibilikisiwe ye-zinc alloy.insimbi iyaqina lapho iphola.Ingxubevange yeZinc iyinto ehlala isikhathi eside kakhulu ngoba ayigobi noma ayinqamuki futhi ayibizi kakhulu.iqinile futhi iphinikhodi ethengekayo.Ngaphezu kwalokho, ilula kunethusi noma insimbi futhi isetshenziselwa iphini lokufa.
Inaliti yokuphonsa ingakhethwa kulo lonke isiliva, lonke igolide, nanoma yimuphi omunye umbala wensimbi.
Ungakhetha uqweqwe lwazo oluthambile noma oluqinile ohlwini lwethu olugcwele lwemibala ye-Pantone noma ye-PMS, futhi sinezinhlobonhlobo zemibala AMAKHADI ongakhetha kuwo ukuze ukhiqize kangcono umkhiqizo ophelele, onamandla, ngakho ubukeka ufana kakhulu nomjovo wesikhunta.
Izinaliti zokudubula zinikeza ukuguquguquka okuphelele emkhiqizweni, okuvumela umumo wangokwezifiso ekwakhiweni ngenombolo engenamkhawulo yezinzuzo ezengeziwe - konke mahhala
Amakhasimende amaningi asebenzisa izikhonkwane ze-die casting ngoba afuna ukukhombisa umklamo oyinkimbinkimbi noma umphumela welogo, aphishekele ikhwalithi ephezulu enemiphumela yokubuka, futhi adinga ukuthungwa.
Noma bangase badinge iphinikhodi enomumo oyinkimbinkimbi noma ongajwayelekile.
Bafuna imikhiqizo eyingqayizivele.
Ngokuvamile, izikhonkwane ze-die - cast zi-oda uma zikhulu kunamasentimitha amabili ngosayizi.
Ngenxa yokuthi inqubo yokwenza idayi iyinkimbinkimbi kunenqubo yokwenza iphinikhodi yokufaka isitembu sensimbi, ibiza kakhulu.
Kodwa noma kunjalo, intengo iyahlukahluka kuye ngobukhulu kanye nenani le-oda.
Singawuguqula ube umsebenzi wobuciko ngombono wakho wokuklama noma umqondo womklami wethu ochwepheshe, futhi siwuhlelele umkhiqizo wakho kuphela.
I-PinProsPlus ayikhokhisi imali eyengeziwe.
Okwedlule: Izikhonkwane ze-Lapel ezilengayo
Olandelayo: Iphinikhodi yokufa enamathele
Die casting lapel izikhonkwane